Madaxweynaha Puntland oo kulan Wada Jira Laqaatay Golaha Wasiirada iyo Isu Duwayaasha Wasaaradaha Puntland ee Gobolka Sanaag
September 20, 2018 - Written by Editor
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 20 Sep 2018 kulan kulayeeshay degmada Badhan Golaha Wasiirada Dowladda Puntlnad iyo Isuduwayaasha Wasaaraddaha dowladda Puntland ee gobolka Sanaag. Kulanka ayaa waxaa iyaguna kasoo qayb galay maamulka gobolka iyo kan degmada iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland.
Isuduwayaasha Wasaaradaha Puntland ayaa ugu horayn Madaxweynaha uga warbixiyey shaqooyinka baaxada leh ee xafiisyadoodu ka qabtaan guud ahaan gobolka Sanaag, waxaana ay dhammantood hoosta ka xariiqeen in gobolka ay ka fuliyaan adeeg dowladeed oo rasmi, isla’markaana uu ka hirgalay nadaam dowli ahi tan iyo markii uu Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas la wareegay hogaaminta dowladda Puntland.
Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa is xog waraysi iyo kala warqaadasho kadib ayaa waxaa uu ku booriyey dhammaan isuduwayasha Wasaaradaha Puntland inay ka shaqeeyaan horumarinta gobolka gaar ahaan degmada, wanaajinta wada shaqaynta maamulka degmada iyo gobolka si loo helo horumar wanaagsan, shaqo hufan iyo wadatashi dhan walba ah.
“Dhammantiin shaqo wanaagsan ayaa u haysaan gobolka, waxaan idinku boorinayaa inay si hufan u qabataan shaqooyinkiina dawliga ah ee masuuliyaddu idinka saaran tahay, gacan ayaan ka geysan doonaa baahiyaha jira ee gobolku u baahan yahay in laga haqab tiro’ ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda Puntland.
Ugu danbayn, Madaxweynaha, dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxmed Cali Gaas ayaa sheegay in ay maanta shirka Golaha Wasiirada dowladda Puntland oo ka qabsoomay markii ugu horaysey degmada Badhan ay uga hadlidoonaan xaalada guud ee gobolka, ajandahana ay ku jirto baahiyaha iyo guud ahaan siyaasadda gobolka Sanaag.